Degso Mozilla Firefox loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (50.20 MB)
Degso Mozilla Firefox,
Firefox waa biraawsar internet furan oo furan oo ay soosaartay Mozilla si loogu oggolaado isticmaaleyaasha internetku inay si xor ah oo dhakhso leh u baaraan shabakadda. Mozilla Firefox, oo loo soo bandhigo isticmaaleyaasha gebi ahaanba bilaashka ah, oo ay la socoto cusbooneysiintii ugu dambeysay; Waxay noqotay mid iska caabinaysa tartamayaasheeda sida Google Chrome, Opera iyo Microsoft Edge xagga xawaaraha, amniga iyo iswaafajinta.
Soodejiso Mozilla Firefox
Browser-ka internet-ka, oo ku guuleystey inuu ku guuleysto qadarinta dadka isticmaala internetka oo ay ugu wacan tahay isku xirnaantiisa fudud iyo isticmaalka-fudud, ayaa u oggolaaneysa isticmaaleyaasha inay dareemaan ammaan iyagoo uga mahadcelinaya fursadaha amniga iyo sirta dheeraadka ah Firefox, oo soo jiidata dareenka horumariyeyaasha maaddaama ay tahay barnaamij furan oo furan, waxay u keentaa xalal cusub baahiyaha isticmaala cusboonaysiin kasta.
Firefox, oo laga xayuubiyey qalab-darrada aan loo baahnayn ee Mozilla, waxay ku fadhiisatay carshi quluubta adeegsadayaal badan oo ah biraawsarkii ugu horreeyay ee internetka ee adeegsada qaab-dhismeedka biraawsarka la hubo ee ay aqbaleen tartamayaasha kale. Isku darista dhammaan xulashooyinka qaabeynta ee ka hooseeya hal menu oo si fudud loo heli karo, biraawsarku wuxuu u oggolaanayaa dhammaan isticmaaleyaasha inay si fudud ula qabsadaan goobaha ay u baahan karaan.
Firefox, oo ahayd tii ugu horreysay ee adeegsata daaqad dahsoon ama astaanta astaanta asturnaanta ee loo sameeyay isticmaaleyaasha aan doonaynin inay internetka si qarsoodi ah uga baaraan oo ay raadadka dambe uga tagaan, waxay ku guuleysatay inay ka horreyso qaar badan oo ka mid ah tartamayaasheeda aagga oo ay tusaale u tahay iyaga. Isla mar ahaantaana, biraawsarka, oo ka ilaaliya adeegsadayaasha internetka astaamo ay ka mid yihiin teknolojiyadda ilaalinta xatooyada aqoonsiga, fayraska iyo is-dhexgalka malware, amniga waxyaabaha, ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican fasalkiisa markay tahay amniga.
Browser-ka internet-ka, oo ay u heli karaan isticmaaleyaasha labada desktop iyo aaladaha mobilada, waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u wada hesho dhammaan xogta aad u baahan tahay labadaba guriga, shaqada iyo waddada, taas oo ay ugu wacan tahay astaamaha is-waafajinta sare, waxayna kuu oggolaaneysaa inaad sii wadato shaqeeyaan wakhti kasta. Intaa waxaa sii dheer, waxaad astaysto biraawsarka, kaas oo bixiya koronto iyo taageero mawduuc ah sidaad u jeceshahay.
Natiijo ahaan, haddii aad u baahan tahay biraawsar bilaash ah, la isku halleyn karo, dhakhso leh oo awood leh oo beddel u noqon kara biraawsarka internetka ee aad isticmaaleyso, waa inaad iska hubisaa Firefox, oo ay horumarinayso Mozilla.
6 Sababood oo Loogu Soo Degsado Browser Firefox
Halkan waxaa ku yaal dhowr sababood oo aad ku soo degsan karto biraawsarka Firefox soonka, badbaadada iyo bilaashka ah:
Caqli badan, raadinta dhaqsaha badan: Ka raadi barta cinwaanka, Fursadaha makiinadaha raadinta, Soo jeedinta raadinta caqliga ah, Ka raadi calaamado - taariikhda iyo tab furan
Kordhi wax soo saarkaaga: Wuxuu la shaqeeyaa wax soo saarka Google. Qalabka shaashadda lagu dhejiyay. Maamulaha calaamadeynta. Soo jeedinta cinwaanka otomaatiga ah. Iswaafajinta qalabka iskutallaabta. qaabka akhristaha. Higaad higaada. Tab biinanka
Daabac, wadaag oo ciyaar: Ka jooji fiidiyaha iyo maqalka otomatig-bilowga. Sawir sawir ah. Waxyaabaha ku jira isticmaale-gaarka ah ee tabka cusub. Ha la wadaagin xiriiriyeyaasha.
Ilaali macluumaadkaaga gaarka ah: Xannibo cookies-ka dhinac saddexaad. Xirida faraha faraha. Joojinta macdan qodayaasha. Habka dahsoon Warbixinta ilaalinta shaqsiga.
Ku xafid macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed kuwo amaan ah: Digniinta degelka xogta jabisay. Maamulaha ereyga sirta ah. Nadiifinta taariikhda. Buuxinta foomka otomaatiga ah Cusbooneysiinta otomaatiga ah.
Habee biraawsarkaaga: Mawduucyada. hab mugdi ah. Maktabada Plugin. Habee hababka bar raadinta. Beddelida qaabka tab cusub.
Mozilla Firefox Noocyada
Cabirka Faylka: 50.20 MB
Google Chrome waa biraawsar internet fudud oo fudud oo caan ah. Ku rakib biraawsarka Google Chrome,...
Firefox waa biraawsar internet furan oo furan oo ay soosaartay Mozilla si loogu oggolaado...
Opera waa biraawsar internet beddel kale ah oo ujeedkiisu yahay in lagu siiyo dadka isticmaala...
Iyada oo ay ku xirantahay qaab fudud oo casri ah, Safari ayaa kaa jiidaya jidkaaga inta lagu guda...
Browser CCleaner waa biraawsar shabakad leh astaamo amni iyo asturnaan si loo ilaaliyo amniga...
Waa maxay Maamulaha Soo Dejinta Internetku? Maamulaha Soo Dejinta Internetka (IDM / IDMAN) waa...
Barnaamijka Beddelka Cinwaanka MAC ee Technitium waa codsi bilaash ah oo aad isticmaali karto si...
Ares, oo ah mid ka mid ah feylasha la doorbido, muusigga, fiidiyaha, sawirka, softiweerka iyo...
Opera GX waa biraawsarkii ugu horreeyay ee internetka loogu talagalay cayaaraha. Daabacaadda gaarka...
AdBlock waa sheyga ugu fiican ee xayeysiinta xayeysiinta ah ee aad soo dejisan karto oo aad u...
Midnimo Web Player waa ciyaariyahan ciyaar 3d ah oo bilaash ah oo u oggolaanaya dadka isticmaala...
Yandex Browser waa shabakad internet oo fudud oo dhakhso badan oo waxtar leh ayna soo saartay...